छिमेकीले फालेको खाना खाएर हुर्केकी हुन् राखी सावन्त, यति गरिबीवाट कसरी बनिन् चर्चित कलाकार ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/छिमेकीले फालेको खाना खाएर हुर्केकी हुन् राखी सावन्त, यति गरिबीवाट कसरी बनिन् चर्चित कलाकार ?
एजेन्सी । नोभेम्बर २५ बलिउड कलाकार राखि सावन्तको जन्मदिन हो । बलिउडमा राम्रो नतर्कीका रुपमा सबैले राखी सावंतलाई चिन्छन्। उसको धेरै फ्यान छन् । आज राखीलाई कुनै अभाव छैन । नाम दाम सबै छ । तर थोरैलाई मात्र थाहा छ कि राखीको बाल्यकाल निकै अभावमा वितेको थियो ।
आफ्नो बाल्यकालको बारेमा कुरा गर्दै, राखीले भनेकी थिई( ुमेरो हात काँप्छन्, वास्तविकता बताउन मेरो मनले मान्दैन । मैले धेरै गरिबी देखे। यति गरिबी कि जब म आमाको पेटमा थिएँ, मेरी आमाले इट्टा र ढुंगामा खाना पकाउँनुहुन्थ्यो। म यस्तो गरिब परिवारकी छोरी हुँ ।
ुजब म ठूलो भएँ, म आमालाई मैले म स्कूल जान्छु भने । तर त्यो सम्भव थिएन । ुमलाई बाल्यकालदेखि नै अभिनय र नृत्यको एकदमै मनपर्ने थियो। तर मेरो परिवारमा यो खासै मन पराइएन। मेरो कुनै गॉडफादर थिएन। म पढे लेखेको पनि थिइन् । म इन्डस्ट्रीमा आउँदा मलाई केहि पनि थाहा थिएन। मलाई अभिनय थाहा थिएन।
तर नायिका हुनु पर्ने थियो। म फिल्म उत्पादकका साथ फोटो लिने गर्थे, उनीहरू कोठा भित्रबाट एक्लै अभिनय गर्थे।